Global Aawaj | 'दाङमा उपनिर्वाचनको तयारी पूरा’ 'दाङमा उपनिर्वाचनको तयारी पूरा’
‘दाङमा उपनिर्वाचनको तयारी पूरा’
११ मंसिर २०७६ 5:13 pm
दाङ । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । जिल्ला निर्वाचनको कार्यालय दाङले निर्वाचनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको निधनपछि रिक्त दाङ क्षेत्रनम्वर ३ (ख) र लछिनप्रसाद बुढामगरको निधनपछि रिक्त घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १६ को वडाध्यक्ष पदका लागि हुन थालेको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
‘दाङमा हुने उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पठाइसकिएको छ’, निर्वाचन प्रमुख अधिकृत थापाले भने, ‘मतदात स्थलको तयारी पूरा भयो । अब मत गणनाको तयारी हुन बाँकी छ ।’ अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बदर मत घटाउने गरी लागि परेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाएको पनि बताए । अघिल्ला चुनावमा जस्तो यस पटकको चुनावमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना न्यूनिकरण गर्न आफुहरु सफल भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचनका लागि दाङमा ८२ मतदान केन्द्र तोकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । क्षेत्र नम्वर ३ (ख) प्रदेश सभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १६ को वडाध्यक्षका लागि ३४ मतदानस्थल र ८२ मतदान केन्द्र तोकिएको थापाले जानकारी दिए । प्रदेश सभा ३ (ख) मा ३२ र घोराही १६ मा २ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । दाङ क्षेत्र नम्वर ३ (ख) अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, २, १० र ११ मा ५ वटा, बबई गाउँपालिकामा १०, दंगिशरण गाउँपालिकामा ८ तथा शान्तिनगर गाउँपालिमा ९ मतदानस्थल तोकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार घोराही–१६ का लागि आधारभूत विद्यालय सानी अम्वापुर र सिर्जनशील आधार विद्यालय बाहुनडाँडालाई मतदान केन्द्र तोकिएको थापाले जानकारी दिए ।
दाङमा डेढ वर्षयता १७ हजार २१० मतदाता थपिएका छन् । वि.सं. २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनमा तीन लाख ४५ हजार ६ सय ३३ मतदाता भएकोमा हाल तीन लाख ६२ हजार ९ सय ४२ मतदाता पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । आसन्न उपनिर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नका लागि ७ सय ३६ कर्मचारी परिचालन गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रका लागि ५ जना कर्मचारीका दरले ४ सय १० सरकारी कर्मचारी र ३ सय २६ स्वयंसेवक कर्मचारी गरी ७ सय ३६ कर्मचारी परिचालन गरेको थापाले जानकारी दिए । ३४ मतदान स्थलका ८२ मतदान केन्द्रका लागि तोकिएका मतदान अधिकृतले स्वयंसेवक चयन गर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए ।
दाङका ६ वटा मतदान स्थल अतिसंवेदनशील रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । ३४ वटा निर्वाचन स्थलमध्ये २ वटा सामान्य, २६ वटा संवेदनशील र ६ वटा निर्वाचन स्थल अति संवेदनशील रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थापाले जानकारी दिए । भयरहीत वातावरण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन स्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।